डुमरियाका आगलागी पिडितलाई पत्रकार मार्फत रामधुनी बचत समुह दोहा–कतारबाट आर्थिक सहयोग -
डुमरियाका आगलागी पिडितलाई पत्रकार मार्फत रामधुनी बचत समुह दोहा–कतारबाट आर्थिक सहयोग
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण १३, २०७५ समय: ७:३५:०६
झुम्का,फाल्गुन १३ । दोहा–कतारमा कार्यरत प्रवासीहरुले गठन गरेको रामधुनी बचत समुहले आगलागी पिडितलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । प्रवासिहरुकोलागी हकहितमा गठन गरेको समुह दोहा–कतारका पदाधिकारीहरुले रकम संकलनगरी रु २० हजार १ सय सहयोग गरेका हुन् ।
सहयोग रकम ग्रहण गर्दै पिडित परिवारले दोहा–कतारमा कार्यरत बचत समुहका सहयोगी दाताहरुलाई धन्यवाद ब्यक्त गरेका छन् । तत्कालै भएको आर्थिक सहयोगले ठुलो गुणलगाएको चुमकलाल चौधरीले बताउदै सहयोगीहरुको परिवारमा सुख समृद्धिको कामना ब्यक्त गरे । बिदेशमा रहेपनि सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको भन्दै सहयोगीहरुलाई पनि भगवानले सहयोग गरुन भन्दै उन्को आमा मंगली देवि थरुनिले कामना गरिन् । आर्थिक सहयोगले तत्कालै राहतको महसुस भएको जेठो छोरा महेश चौधरीले बताए ।
बिपतमा परेका परिवारलाई सहयोगकालागी समुहका अध्यक्ष मनोज चौधरीको संयोजकमा संकलन भएको हो । सातसमुन्द्रपारी भएपनि समाजमा सहयोगको दायित्व बोकेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । रकम बितरण भईरहदा समुहका उपाध्यक्ष दिलिप चौधरीले संयोगले सोहि समयमा दोहा–कतारबाट फोन गरेका थिए । फोन मार्फतनै प्रत्यक्ष रुपमा उपाध्यक्षले सहयोगको सम्बोधन गरेका थिए । राहत बितरण संयोजक तथा पत्रकार सुनिल चौधरीको मोबाईलबाट प्रत्यक्ष पिडित परिवारले समेत धन्यवाद ब्यक्त गरे । सहयोग रकम पत्रकार सुनिल चौधरीको नामबाट कोषाध्यक्ष उपेन्द्र चौधरीले पठाएका थिए ।
सहयोग रकम रामधुनि वडानं. १ वडा सदस्य उमादेवि थरुनि, राहत बितरण संयोजक तथा पत्रकार सुनिल चौधरी,फोनिज सुनसरी अध्यक्ष धिरेन्द्र चौधरी,सामाजिक कार्यकर्ता थारु महिला उत्थान समाजकी अध्यक्ष सिता थरुनी,कोषाध्यक्ष आशा चौधरी र रेडियो रामधुनीका स्टेशन मेनेजर नबिन चौधरीले संयुक्त रुपमा पिडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो । हस्तान्तरण गर्दै वडाकार्यालयबाट सहयोग गर्ने वडा सदस्य उमा थरुनीले प्रतिबद्धता गरिन् । उत्थान समाजले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
सुक्रवार आगलागी भएको थियो । आगलागीबाट पिडित परिवारको घर जलेर पुर्ण रुपमा नष्ट भएको छ । घर सहित,अन्नपात, लताकपडा गरगहना,दराजमा राखेको रकम समेत जलेको जानकारी दिए । आगलागीबाट रु १६ लाख मुल्य बराबरको क्षति भएको पिडित परिवारले जनाएको छ ।
सामाजिक कार्यमा रामधुनी बचत समुह दोहा–कतारको सहयोग……….
रामधुनी बचत समुह दोहा–कतारले आफ्नो सहयोग सामाजिक कार्यमा गर्दै आएको छ । नेपालिहरुको सस्कृति संरक्षण,बिपत जोखिममा परेकालाई आर्थिक सहयोग जुटाई दिने गरेको छ । यस भन्दा पहिले रामधुनीकै एक जना घाटि क्यान्सर बिरामी भएका लाई उपचार खर्च सहयोग गरेको थियो । झुम्कामा भएको माघि,जितिया लगायतका सांस्कृति कार्यक्रमहरुमा आर्थिक सहयोग गर्दै संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने भुमिका खेलेको छ । त्यसैगरी भरखरै आगलागी पिडितलाई सहयोग गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेकोे छ । दोहा–कतारमा कार्यरत रहेकाहरुलाई यस समुहले सहयोग गर्ने गरेको छ । यसमा आबद्धहरुले बचत संकलन गर्ने गरेको अध्यक्ष मनोज चौधरीले बताए । अध्यक्ष ईनरुवा ९ बबियाका निवासि हुन् । कम्पनिले तलब नदिएको अवस्थामा घरमा तत्कालै आर्थिक समस्या पर्दा संकलन गरेको बचतले पठाउने गरेको छ । संकलन गर्नेहरुले घर आउदा समुहमा जम्मा गरेको बचत रकम र ब्याज सहित लिएर आउने गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । बचत समुह गठनले एक अर्कामा चिनजान,भेटघाट हुने गरेको बताए । भेटघाट हुदा दुःख सुख बाड्ने र फेरी काममा फर्किने गरेको अध्यक्षले जानकारी दिए । समाज समृद्धिकोलागी प्रवासिहरुले भुमिका खेलि रहेको छ । आगलागी पिडितलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा वडा सदस्य उमा थरुनीले समाज समृद्धिकोलागी प्रवासिहरुले भुमिका खेलिरहेको बताईन् । परिवार छोडेर बिदेशमा उनीहरु दुःखमा छदै छन् तर पनि आफनो बेदनालाई सहेर अरुको दुःखमा साथ दिनु महान कार्य रहेको वडा सदस्यले बताईन् । सहयोगनै धर्म रहेकोले रामधुनी बचत समुहले मानवता धर्म निर्वाह गरेको उत्थान समाजकी अध्यक्ष तथा महिला अधिकार कर्मि सिता थरुनिले बताईन् । बिपतमा परेकालाई पत्रकारले सामाचार प्रवाहगरी सहयोग जुटाउने कार्य गरेको आदिवासि जनजाति पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष धिरेन्द्र चौधरीले बताए । रेडक्रस सोसाईटिले २४ घण्टा भित्रै राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउदै त्याहाँ राहत नपुगेकोमा आपत्ति जनाए । यस घडिमा स्थानिय तहले सकृयतापुर्वक कार्यगर्नु पर्ने पत्रकार चौधरीले सुझाव दिए ।
उत्थानकी कोषाध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता आशा चौधरीले पिडित परिवारलाई राहतकोलागी सबैले सहयोग गर्नु पर्ने बताईन् । यसका साथै अन्य संघ संस्थाबाट पनि सहयोग जुटाउन पहल गर्ने बताईन् । बचत गर्ने बानि असल रहेको पत्रकार नबिन चौधरीले बताए । आफुले आफैलाई आर्थिक समृद्धि बनाउनु बचतको आवश्यक्ता रहेको औल्याए । बचत गर्ने अभियानलेनै उनीहरुलाई सहयोगको भावना जागृत भएको बताए । यसबाट सबैले पाठ सिक्नु पर्ने बताए ।